पहिलोपटक जीवन बीमा पोलिसी खरिद गर्दै हुनुहुन्छ ?यी कुरामा ध्यान दिनुस्
काठमाण्डौ । सन् २०२० मा कोरोना महामारी फैलिएपछि विश्वमा धेरै नै परिवर्तनहरु देखिएका छन्। यसको प्रभाव बीमा क्षेत्रमा समेत देखिएको छ। बीमा क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक जगतका लागि कुनै‘अन्डरडग(जसका बारेमा कम चर्चा हुन्छ)’का रुपमा रहदैँ आएको छ। कोरोना महामारीपश्चात मानिसहरुमा आफुलाई केहि पनि हुदैन वा कुनै रोगले छुदैँन भन्ने भ्रम हटेको...
काठमाण्डौ । मानव जीवनमा अनिश्चितता कुनै पनि समय आउँन सक्छ। जस्तै कि असामायिक निधन वा स्वास्थ्य आपतकाल। यस्तै दुर्घटना वा सवारी साधन, सम्पत्ति इत्यादि को नोक्सानी पनि हुने सम्भावना हुने गर्छ । यस्ता कठिन अवस्थाहरुबाट पार पाउन निकै ठूलो रकमको आवश्यकता पर्न सक्दछ। यसका लागि आफुले बचत गरेर राखेको रकम र परिवारले निकै मेहनत गरेर कमाएको...
काठमाण्डौ । जीवन बीमा भनेको बीमा कम्पनी (बिमक० र बीमा गर्ने व्यक्ति (बिमित० बीच भएको एउटा कानूनी करार हो जसमा बीमितले निश्चित रुपले एकैपटक वा किस्ताबन्दिका रुपमा पटकपटक निश्चित बीमाशुल्क बुझाएबापत बीमकले निजको मृत्युल भएमा निजको परिवारलाई वा जीवित रहेमा बीमा अवधि पछि निजलाई नै कुनै निश्चित रकम दिने सम्झौता भएको हुन्छ । जीवन र...
काठमाण्डौ । स्मार्टफोन जस्तै कारहरुका पनि कयौँ सेगमेन्ट र भेरियन्टहरु हुने गर्दछन्। जस्तो कि ह्याचब्याक, सेडान, एसयुभि, स्पोर्टस कार, लग्जरी कार, सामान्य कार, पेट्रोल कार, डीजल कार आदि। अहिले त विद्युतीय कारहरु पनि सडकमा दौडिन थालेका छन्। यी कारहरुका लागि जति धेरै पेट्रोल, डिजेल आवश्यक पर्दछ, त्यति नै धेरै आवश्यक पर्ने गर्दछ कारको बीमा। कार...
काठमाण्डौ । भविष्यमा आइपर्ने भवितव्यको सामना गर्न सजिलो हुुने अभिप्रायले अक्सर आम मानिसहरुले जीवनमा एकपल्ट भएपनि बीमा गरेकै हुन्छन् । निशंकोच भई भन्नुुपर्दा बीमा खरीद गर्नु जीवनको महत्वपूर्ण निर्णयमध्ये एक हो । हामीमध्ये अधिकांशले अनुुमान या त कसैको लहडमा लागेर बीमा खरीद गरिरहेका हुन्छौ । यसो गरी बीमा गर्दा हुुने नोक्सानीको भागिदार...
काठमाण्डौ । वर्तमान अवस्थामा औषधी र अस्पतालको खर्च निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। स्वास्थ्य उपचारको खर्चमा भईरहेको निरन्तरको वृद्धिले एउटा सामान्य मानिस वा कुनै कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिलाई स्वास्थय संकटको बेला खर्चको जोहो गर्न लगभग असम्भव जस्तै हुन्छ। यही कारण विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुका लागि मेडिकल इन्स्योरेन्स प्रदान...
काठमाण्डौ । विदेश घुम्न जानु छ भने हामी एक महिना अघि नै योजना बनाउने गर्दछौ। कपडा खरिद देखि लिएर कहाँ–कहाँ घुम्न जाने हो, त्यसको सूची बनाउने गर्दछौ। यसका साथै विदेशी मुद्रादेखि लिएर क्यामेरासम्मको व्यवस्था जुटाउने गर्दछौँ। तर यी सबै व्यवस्थापनका बीच के तपाई÷हामी यात्रा बीमा पोलिसी लिनतर्फ ध्यान दिन्छौ त ? के हामी विदेशमा मेडिकल...
काठमाण्डौ । जीवन बीमा खरिद गर्दा तपाइँ हामी सबैले एकमुष्ठ राशिमा ध्यान दिने गर्दछौ। तथापी पोलिसीहोल्डरको मृत्युको अवस्थामा उत्तराधिकारी(नोमिनी)लाई एकमृष्ठ प्राप्त भएको रकम कसरी समूचित उपयोग गर्ने भनेर जानकारी हुनु पर्दछ। यो त्यस्तो अवस्थामा अझै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ, जब पोलिसीहोल्डर परिवारमा आम्दानीको एक्लो स्रोतको रुपमा रहेको...
काठमाण्डौ । जीवन बीमा र दुर्घटना बीमा उस्तै उस्तै हुन् भन्ने आम बुझाइ रहेको पाइन्छ। तर यी दुवैबीच भिन्नता हुन्छ। जीवन बीमाले मृत्यु पश्चात परिवारका सदस्यहरुलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नै गर्दछ। परिवारमा कमाउने अन्य कुनै सदस्य नभएको व्यक्तिको परिवारका सदस्यहरुको लागि जीवन बीमाले आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन धेरै नै सहयोग गर्ने...
काठमाण्डौ । यदि तपाइँ बीमा पोलिसी खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्म भर्दा बखत एकदमै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कयौँ पटक यस्तो हुन्छ कि फर्म भर्दाखेरी हतार गर्दा हामीले गलत जानकारी भर्न पुग्दछौँ। जस कारण फर्म रिजेक्ट हुने गर्दछ। तथापि गलत भएपछि तपाइँले गलत जानकारी जानीजानी दिनु भएको हो कि वा अनजानमा यसले अर्थ राख्ने गर्दैन। त्यसैले...
यी ५ कारणले बढाउँछन् जीवन बीमा पोलिसीको प्रिमियम
काठमाण्डौ । प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा, जीवन बीमा पोलिसीले एकदमै महत्व राख्ने गर्दछ । पोलिसी प्रिमियमको राशि पोलिसीहोल्डरको स्वास्थ्य, आनीबानी र व्यवसायको प्रकृतिमा निर्भर रहने गर्दछ । यिनै कारकहरुले प्रिमियम राशिलाई घटाउन वा बढाउन सक्छन् । निश्चीत रुपमा, धुम्रपान वा मद्यपान गर्ने व्यक्तिको जीवन बीमा प्रिमियम नगर्ने पोलिसीहोल्डरको...
किन आवश्यक छ सबैका लागि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ? थाहा पाउनुहोस् कारण !
काठमाण्डौ । व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पोलिसी एक प्रकारको बीमा पोलिसी हो। जसले तपाइँलाई आकस्मिक अपांगता वा मृत्युका कारण हुने आर्थिक नोक्सानीबाट माथि उठ्न सहयोग गर्ने गर्दछ। यदि दुर्घटनाका कारण तपाइँको शरीरका कुनै एक अंग रहेन भने, यस्तोमा दुर्घटना बीमा पोलिसीले तपाइँको परिवारलाई एकमुष्ठ राशि प्रदान गर्ने गर्दछ। जसले अपांगताका कारण आएका...
टर्म इन्स्योरेन्स योजनाले होम लोनमा यसरी गर्ने गर्दछ सहयोग, यस्ता छन् फाइदा
काठमाण्डौ । हर व्यक्तिको एउटा सपना हुने गर्दछ कि उसको एउटा घर होस्। दिउँसो सारा संसार घुमेपनि साझँ आरामका साथ रात बिताउनका लागि आश्रयस्थल होस्। व्यक्तिले प्रत्येक दिन यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयासरत हुन्छ। ब्याज दर कम हुनुका साथै अतिरिक्त कर लाभका कारण अहिले होम लोन(घर कर्जा)सम्मको पहँुच सजिलो भएको छ। तथापि घर कर्जा चयन गर्दाखेरी...
स्वास्थय बीमा खरिद गर्दा यि कुरामा ध्यान दिन आवश्यक, हुनेछ फाइदा
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीको अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा सबैको प्राथमिक आवश्यकतामा समावेश भएको छ। अझ विशेष गरेर जेष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमाको आवश्यकता त हुनै नै गर्दछ। तिव्र गतिमा बढिरहेको स्वास्थ्य खर्चले जो कोहिलाई पनि आर्थिक संकटतर्फ धकेल्न सक्छ। यो आपतकालिन अवस्थाबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य बीमा आवश्यक पर्ने गर्दछ।...
३० वर्षको उमेरमा किन खरिद गर्ने स्वास्थ्य बीमा ? यस्ता छन् कारण
काठमाण्डौ । तपाइँले स्वास्थ्य बीमा गर्नुभएको छ भने यसले तपाइँको चिकित्सा उपचार खर्चको कभरेज प्रदान गर्ने गर्दछ। बीमासँग सम्बन्धित विज्ञहरुले सामान्य रुपमा मानिसहरुलाई चाडोभन्दा चाडो स्वास्थ्य बीमा खरिद गर्न सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने गर्दछन्। यस्तो यस कारण कि मेडिकल आपतकाल जुनसुकै बेला पनि उत्पन्न हुन सक्छ र यसको सामना गर्नका लागि जो...